Puntland oo laga bilaabay maalmaha caafimaadka dhallaanka iyo munaasabado lagu maamuusayo oo ka dhacay meelo kale duwan. – Radio Daljir
Luulyo 16, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, July 16 – Maanta deegaannada Puntland waxaa si siman uga wada bilawday ololaha maalmaha tallaalka carruurta iyo hooyooyinka kaasoo socon doono muddo shan-maalmood, iyadoo Puntland-na ay wadaagaan maalmahaan caafimaadka Soomaaliya oo dhan oo uu ka wada bilawday maanta.
Munaasabado ballaaran oo lagu maamuusayey furitaanka ololaha maalmaha caafimaadka carruurta ayaa maanta oo (Sabti ah) lagu qabtay magaalooyinka waaweyn ee Puntland taasoo lagu muujinayey ahmiyadda iyo qiimaha maalintaani ay u leedahay dhallaanka iyo hooyooyinka.
Munaasabaddii ugu ballaarnayd waxaa maanta lagu qabtay isbitaalka weyn ee magaalada Galkacyo taasoo ay ka qayb-galeen mas’uuliyiin sar sare oo ka tirsan dawladda Puntland oo uu ka mid yahay wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cali C/llaahi Warsame, isku-wadaha caafimaadka gobolka, madaxa arrimaha caafimaad ee isla wasaaradda caafimaadka, mas’uuliyinta mamulka gobolka, saraakiil ka socday hay’adaha WHO, UNICEF iyo sidoo kale hawl-wadeenno caafimaad oo aad u tiro badan.
Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cali C/llaahi Warsame, oo ka hadlay munaasabadda lagu daah-furayey maalmaha caafimaadka carruurta ayaa sheegay olalahaani in uu macne iyo miisaan weyn u leeyahay ubadka ayna lagama maarmaan tahay hooyo-kasta iyo aabbe-kasta in uu ka tallaalo carruurtiisa cudurrada dilaaga ah.
Sidoo kalena madaxdii kala duwanayd ee ka socday hay’adaha dawladda iyo kuwa Qaramada Midoobay, kana qayb-galay xafladdii isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo ayaa iyana si aan kala har-lahayn uga sharqamiyey sida ay lagama maarmaanka u tahay tallaalidda ubadka ka yar 5 sano iyo hooyooyinka uurka leh.
Magaalooyinka Garoowe, Bossaso, Qardho, Badhan, Dhahar iyo Buuhoodle ayaa lagu qabtay xaflado noocaan oo kale ah oo la xiriiray olalaha maalmaha caafimaadka dhallaanka, kuwaasi oo iyana ay sidaas oo kale ay ka qayb-galeen madax heer gobol iyo heer dawlad dhexe iskuga jira iyo sidoo kale saraakiisha hay’adaha QM.
Sikastaba ha ahaatee muddo 5 maalmood ayuu si siman tallaalku uga socon-doonaa dhammaanka gobollada, degmooyinka, tuulooyinka iyo waliba dhulka miyiga ah ee Puntland sida ay caddeeyeen madaxda wasaaradda caafimaadka, waxaana olalahaani-tallal uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii dambe la sheegayey carruur uu soo ritay xanuunka Jadeecadu.